CupHead Kuwedzera Apk Dhawunirodha Ye Android [Game] - Luso Gamer
CupHead Kuwedzera Apk Dhawunirodha Ye Android [Game]
April 6, 2022 by John Smith
Wagadzirira here kuona itsva arcade yekutamba application iyo inonakidza kwazvo maererano nekutamba? Kana hongu saka dhawunirodha yazvino vhezheni yeCupHead Kuwedzera Apk kubva pano. Uye unakirwe nekutamba gameplay neshamwari.
Iyo gameplay inopa inochinja maonero ane 2D Display. Mukati memutambo akawanda akasiyana ma pro maficha uye sarudzo zvinowedzerwa. Izvi zvinosanganisira chombo chepamusoro, mavara, kugona kupfura uye kufamba nekukurumidza. Rangarira chimiro chinogona kudzorwa uchishandisa makiyi.
Uyu mutambo unoonekwa sewekare uye wakatanga kuvhurwa kune console uye pc gamers. Asi ikozvino vagadziri vakabudirira kuunza iyo Android vhezheni ye 2D Mutambo. Kuti utambe iyo chaiyo CupHead Yekuwedzera Game inoda yakangwara android nhare.
Chii chinonzi CupHead Kuwedzera Apk
Cuphead Kuwedzera Apk ndeye online simulation yakavakirwa chiitiko mutambo wakagadzirwa neC CupHead. Mutambo uyu unosanganisira akawanda mavara. Asi vanhu vanonyanya kukosha mumutambo ihama mbiri. Vaviri ava mukoma nemunin'ina vanoita sevanonakidzwa uye vasina njodzi.
Iyo gameplay inotanga nenyaya inonakidza apo hama mbiri dzakanamatira mukati meimba. Mukuru anorangarirwa somutoro wokutarisira hama dzose dziri mbiri. Kunyangwe mukuru achigara achiziva uye achiita seane kushushikana nezvevana vese.
Nekuda kwemitemo yakasimba nemirau, iyo cuphead uye mugman vanomhanya panze vovanda mukati mekasino. Mukuru anogara achitungamirira vana kuti vasashanyire nzvimbo dzisina kururama. Asi panguva ino vakananga mumaoko adhiyabhorosi uko kwakamirirwa nadhiyabhorosi.
Vana vari kutamba zvakanaka uye vanotanga kuhwina mutambo wega wega. Zvino dhiabhorosi anopinda opa chimwe chinhu chikuru. Asi mugman nemukombe vakarasikirwa nemutambo uye satani akatora mweya yavo. Saka iwe wakazvipira kununura iyo kapu wobva waisa CupHead Yekuwedzera Dhawunirodha.
zita CupHead Kuwedzera
zera 238 MB
Package Zita com.skailgames.cupheadmobile
Inodiwa Android 4.3 uye Uyezve
Mukati memutambo akawanda akasiyana ma pro maficha anowedzerwa. Izvi zvinosanganisira simba rekupfura, zvombo, mavara, akasiyana maturusi ekubatsira uye zviratidzo. Pasina kushandisa izvi zvinhu zvataurwa, hazvigoneke kuwana uye kubudirira mukati memutambo wemutambo.
Pane mamwe matambudziko akakosha angangosangana nevatambi vachitamba. Izvo zvinosanganisira hang, lag uye mutambo wakanamatira pakati. Kugadzirisa matambudziko aya, tinokurudzira vatambi kubaya bhatani rekumisa uye voedza kutangazve.
Kana dambudziko rikasagadziriswa saka tinokurudzira kuti vatambi vatangezve mutambo wacho. Isu tinotenda kutangazve mutambo kunogadzirisa zvese zvinodikanwa ipapo. Kune vatsva, vanogadzira vanodyara iyi yakazara inotungamirwa mutambo.
Iye zvino kutora chikamu mugwaro kunobatsira kunzwisisa mabasa uye mashandiro. Paunenge uchinge wakwanisa kuchengetedza chinzvimbo uye kunzwisisa mashandiro. Zvadaro tinorayira vatambi kuti vaende mberi uye vanakidzwe nekutamba.
Rangarira vagadziri vakatangisa beta vhezheni yemutambo. Nekudaro, zvimwe zvigadziriso zviri mumodhi yakamirira uye zvichasvika mumazuva anouya. Saka iwe wakazvipira kutamba 2P mutambo neshamwari wobva warodha CupHead Kuwedzera Android.
Mvumo dzisina basa hadzimbodikanwa.
Iyo yemutambo interface yakachengetwa iri nyore.
Iyo gameplay inotanga nerwendo runonakidza.
Mavara akawanda anowedzerwa.
Zvombo zvine simba zvakasiyana zvinosvikikawo pakusarudza.
Dashboard yakadzama yekuseta inosanganiswa.
Inzwi, Zvidzore uye Display zvinogadzirisika.
Maitiro ekurodha CupHead Kuwedzera Apk
Tisati tasvetukira kumhedziso, danho rekutanga kurodha. Uye kune iyo vashandisi veandroid vanogona kuvimba newebhusaiti yedu nekuti pano pane yedu webhusaiti tinongopa echokwadi uye epakutanga maApk mafaera. Kuita chokwadi chekuti vashandisi vanovaraidzwa nechigadzirwa chakakodzera.
Isu takaisa iyo yekutamba app pamusoro pemidziyo yakasiyana. Mushure mekuisa iyo gameplay hatina kuwana dambudziko kana nyaya mukati mekushandisa. Kuti udhawunirodhe yakagadziridzwa vhezheni yemutambo app ndapota tinya pazasi-rakapihwa link.
Usati wapa mafaera emitambo mukati mekurodha chikamu. Isu takatoiisa pamafoni akasiyana siyana uye takawana pasina nyaya. Zvakadaro, isu hatimbofa tiri vedzi copyrights uye kana paine chinokanganisa panguva yekutamba isu hatizove nemutoro weizvozvo.
Kune akawanda ezvimwe zvekunyepedzera kuita kwakavakirwa zvakagovaniswa. Kuti uongorore uye unakirwe neaya ehukama emitambo maapplication ndapota isa anotevera maApk mafaera. Izvo zvinosanganisira Gorebox Apk uye Apex Ngano Mobile Apk.
Iwe uri fan hombe yeCuphead naMugman. Uye vakagadzirira kuvabatsira mukupedzisa basa risati ranonoka chishandiso charo. Ipapo isu tinopa zano avo mafeni kuti vatore uye vaise CupHead Kuwedzera Apk yemahara nekudzvanya kumwe chete.
Categories Action, Games Tags 2D Mutambo, CupHead Kuwedzera Android, CupHead Kuwedzera Apk, CupHead Kuwedzera Dhawunirodha, CupHead Kuwedzera Mutambo Post navigation
LeeFire Apk Dhawunirodha Ye Android [Kuwana]
Nodonet Apk Dhawunirodha Ye Android [Mitambo IPTV]